10 ka ugu Fiican Firefox Extensions ee Wax soo saarka WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/10 ka ugu Fiican Firefox Extensions ee Wax soo saarka WordPress
10 ka ugu Fiican Firefox Extensions ee Wax soo saarka WordPress
Haddi aad horumariso mareegaha WordPress ama aad abuurto nuxur addoo isticmaalaya WordPress, waxaa jira wax ay wadaagaan labadoodaba: waa inaad maalin kasta isticmaashaa CMS-ga. In kasta oo ay lama huraan tahay in aad ogaan doonto jid-gaabyo iyo siyaalo aad wakhtiga ku badbaadiso khibradda, waxa kale oo run ah in aad hadda aad wax u qabato si aan waxtar lahayn.
Kordhinta Browser waxay ahayd hab la isku dayay oo run ah oo lagu hagaajinayo qulqulka shaqada ee warshado iyo goobo badan. Xaqiiqdan awgeed, waxaan u maleynay inay ku habboon tahay inaan soo bandhigno liiska qaar ka mid ah fidinta Firefox-ka ugu wanaagsan ee hagaajinta wax soo saarka WordPress ee dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin horumarinta, naqshadeynta, abuurista nuxurka, suuq-geynta, iyo wax soo saarka guud.
Aynu toos u galno liiska.
1. Horumarinta Webka
Hel Developer Web →
Ugu horrayn liiskayaga soo-saare Websaydh, fidinta Firefox oo ku dara dhammaan agabka horumariyaha shabakadda si toos ah biraawsarkaaga shabakadda. Waxa jira noocyo ka mid ah kordhintan oo ay heli karaan daalacayaasha kale sidoo kale, taas oo ka dhigaysa mid la heli karo tiro ka sii balaadhan oo horumariyayaal ah.
Sifooyin dhowr ah oo xusid mudan oo kordhintan waxaa ka mid ah awoodda lagu nadiifiyo cookies-ka fadhiga, muujinta macluumaadka cutubka, muujinta cabbirrada faylka sawirka, wax ka beddelka CSS, iyo soo bandhigida macluumaadka muuqaalka. Waa hab si fiican loo soo koobay, oo dhan-hal ah oo lagu kordhinayo in la geliyo agabka horumarinta ee sida caadiga ah loo isticmaalo meel ay gacanta ku hayaan horumariyayaasha WordPress.
2. Calaamadee Cache
Hel Cache nadiif ah →
Ikhtiyaarka kale waa Clear Cache, kaas oo sida aad filan karto, kuu ogolaanaya inaad ku tirtirto kaydka browserka adigoo hal gujin ah ama si fudud u riixaya F9. Tani waa qalab aad u qiimo badan oo gacanta lagu hayo maadaama horumariyayaashu ay had iyo jeer ku qasban yihiin inay nadiifiyaan khasnadaha boggooda si ay u hubiyaan isbeddelada ay samaynayaan inay u ekaadaan sidii loogu talagalay.
Ma helayso wax ka toosan kan kan laakiin taasi kama dhigayso mid muhiim ah. Ka fakar dhammaan wakhtiyada aad ku dhex qoday goobaha si aad u nadiifiso kaydiyaha browserka, hadda ka fikir inaad wakhtigaas u turjunto hal badhan oo kaliya. Kordhinta qiimaha leh ee browser kasta, haddii aad na weydiiso.
Hel ColorZilla →
Liistada ku xigta waa ColorZilla, Firefox kale oo faa'iido leh oo ka dhigaya xulashada midabka qayb aad u dareen badan oo naqshadeynta iyo horumarinta ah. Taasi waa, waxaad noqon kartaa daalacanaya mareegaha oo markaad hesho midab aad rabto inaad isticmaasho, kordhintan waxay kuu ogolaaneysaa inaad qabsato oo aad kaydsato isticmaalka dambe. Kordhintan waxa ka mid ah qalabka indho-indheeyaha, qalabka midab-dooriyaha, iyo curiyaha gradient.
Aaladaha kale ee halkan lagu soo daray waa falanqeeye midabka, palette viewer, taageero kiiboodhka gaaban, iyo taariikhda midabka si aad u aragto oo aad u gasho midabada dhawaan la badbaadiyey.
Hel Font Finder →
Qalab kale oo runtii waxtar u leh horumarinta WordPress waa Font Finder Firefox fidinta, kaas oo ku daraya kormeeraha font browserkaaga kaas oo kuu ogolaanaya inaad aragto qaababka CSS ee shay kasta oo aad doorato. Markaa, haddii aad ku dhex dhacdo farta aad jeceshahay markaad internetka ka dhex baadhayso, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad dooratid meeshaas bogga, oo adeegso kormeeraha font si aad u aragto farta ay tahay iyo sidoo kale noocyada kale ee CSS ee lagu dabaqay.
Tani waxay noqon kartaa mid faa'iido leh markaad isku dubaridayso qorshaha naqshadaynta boggaaga oo aad ku jirto marxaladda agab ururinta. Ama, waxaa laga yaabaa inaad ka dhacdo guud ahaan xarfaha aad jeceshahay oo aad rabto inaad u qorto mustaqbalka. Kordhintan ayaa si kasta u dabooshay.
5. Hel oo Beddel Qoraalka Tafatirka
Hel oo Beddel →
Markaad wax ka dhex abuurayso WordPress, waxaa laga yaabaa inaad u hesho Hel & Beddel kordhinta Tafatirka Qoraalka qalab wanaagsan oo gacanta lagu hayo. Kordhintaani waxay ku daraysaa raadinta iyo beddelka aaladda meelaha gelinta iyo qoraalka ee browserkaaga. Tani waxay ka dhigaysa mid aad u fudud in aad si sax ah u hesho waxa aad raadinayso adiga oo aan u baahnayn in aad iskaan iska qaado oo aad dhex rogto waxyaabo badan.
Waxay ka shaqeysaa taariikhda raadintaada, kuwa ugu cadcad, waxyaabaha ugu muhiimsan, iyo gudaha meel kasta oo kale oo qoraal ah. Tani aad bay faa'iido u leedahay marka aad curinayso qoraallada baloogga ama macluumaadka degelka sida aad u heli karto oo aad u beddeli karto shaqooyinka, odhaahyada, ama qaybaha oo dhan adiga oo aan u baahnayn in aad iska dhex sawirto farabadan qoraal ah si aad u hesho waxaad raadinayso.
Hel Ahrefs SEO Toolbar →
Kuwa maskaxda suuqgeyn u leh, Ahrefs SEO Toolbar waa ku haboon yahay. Fidinta Firefox-ka waxa ka buuxa qalab iyo agab si aad u dhammaystirto istiraatijiyadda hagaajinta mashiinka raadinta ee bogga iyo si toos ah gudaha WordPress. Waxaa ku jira warbixin SEO ah oo ku taal bogga kaas oo ku siinaya hoos u dhac ku saabsan sida goobtaadu u shaqeyso ilaa hadda.
Waxaad si fudud ugu isticmaali kartaa adigoo la kaashanaya dashboard-ka WordPress oo aad ka faa'iidaysan karto jeeggeeda isku xirka ee jabay, raadiyaha dib u jiheynta, iyo sidoo kale beddelka waddankeeda. Waxaad xitaa wax badan ka heli kartaa kordhintan haddii aad leedahay akoon firfircoon oo Ahrefs.com, kaas oo ku daraya mitirka erayga muhiimka ah, bogga, iyo astaamaha domain sidoo kale. Haddii SEO ay ku xiisaynayso (iyo haddii aad leedahay degel, waa inay noqotaa), kordhintan waa shay hubaal ah oo lagu daro qalabkaaga.
7. Xakamaynta kicinta
Hel Xakamaynta Impulse →
Haddi aad u aragto in aad diirada saarato hawsha ay kugu adagtahay, Impulse Blocker waa fidinta Firefox kale oo weyn oo la tixgeliyo. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad ku darto liiska mareegaha aad rabto in kordhintu ay xannibto waxayna kaa ilaalin doontaa inaad u socdaalto shabakadahaan muddo cayiman.
Waxaad u isticmaali kartaa kordhintan si aad u geliso mareegaha qaarkood "hakis," ama waxaad xannibi kartaa si joogto ah - adiga ayay kugu xiran tahay. Tani waxay noqon doontaa mid waxtar leh haddii aad isku dayeyso inaad ku diyaariso boostada blog ee WordPress oo weli heesta seeriga ee warbaahinta bulshada ayaa ku sii jiidaya. Isticmaalka Impulse Blocker si aad u joojiso mashquulintan iyo tijaabinta waxay kaa caawin kartaa inaad waqti badan ka faa'iidaysato.
8. Ogaanshaha Mawduuca WordPress
Hel Mawduuca Ogaanshaha →
Kordhinta kale ee la tixgeliyo hubinta waa Ogaanshaha Mawduuca WordPress, kaas oo kuu sheegaya mawduuca WordPress ee degelku isticmaalo markaad baadhayso. Waxay ku xidhmaysaa degelka ThemeDetect.com oo marka aad isticmaasho kordhinta, waxay kuu sheegi doontaa dhammaan mawduuca loo isticmaalay mareegta hadda jirta ee aad daawato.
Markaa, haddii aad raadinayso dhiirigelin mawduuca oo aad rabto inaad ogaato sida horumariyuhu u gaadhay muuqaal gaar ah, kordhintan ayaa kaa caawin karta inaad hesho jawaabaha aad raadinayso, adigoon wax qodis ah samayn.
9. Isticmaalaha-Wakiilka Beddelka iyo Maareeyaha
Hel beddelka Wakiilka Isticmaalaha →
Waa kan qalab kale oo anfacaya oo aad ku haysato arsenal-kaaga haddii aad tahay horumariye WordPress. Kordhinta Maareeyaha Isticmaalaha-Wakiilka iyo Maareeyaha ayaa kuu ogolaanaya inaad beddesho xadhigga wakiilka adeegsahaaga browserka si uu u ekaado adigoo booqanaya shabakad browser ama qalab kale. Tani waa wax aad u fiican haddii aad rabto inaad hubiso goobta aad ka shaqaynayso ee u eg browserka iyo xaaladaha qalabka kala duwan.
Waxa kale oo aad u fiican haddii aad si fudud u rabto inaad ka gasho goobta mobaylka miiskaaga adigoon ka boodin hoops.
Hel HTML Validator →
Ugu dambayn liiskayaga halkan waa kordhinta HTML Validator Firefox, kaas oo ku daraya si fudud in loo eego oo loo galo ansaxinta HTML si toos ah gudaha Firefox. Waxay u soo bandhigi doontaa tirada khaladaadka bogga HTML ee shaashadda si aad u aragto haddii wax jaban yihiin jaleecada. Tani waa hab aad u degdeg badan oo lagu xaliyo cilad, iyo in kasta oo aanay kuu sheegi doonin khaladaadku gaar ahaan, waxay kuu sheegi doontaa inay jirto arrin si aad isla markiiba u bilowdo cilad bixinta.
Tani waa faa'iido leh haddii aad ka beddelayso qabyo si aad u aragto WordPress oo aad rabto inaad hubiso in wax walba ay shaqeynayaan ka hor intaadan hore u socon.
Wax soo saarka WordPress oo kordhay ayaa hadda bilaabmaya
WordPress waa nidaam maamul oo awood leh, sida aad ogtahay. Laakiin taasi macnaheedu maaha inaadan hagaajin karin socodka shaqadaada dhexdeeda. Taasi waa sababta isticmaalka fidinta Firefox ay u tahay fikrad caqli badan. Waxay si toos ah ugu biireen khibradaada wax raadinta ee caadiga ah waxayna dhigaan agabka muhiimka ah isla markaaba meel la gaari karo. Uma baahnid inaad booqato mareeg dhinac saddexaad ah marka qalabka si toos ah loogu dabaqo degelkaaga WordPress. Waa waqti-badbaadin iyo wax ku ool ah, taas oo ah nooca dhammaan barta qalabka wax soo saarka, miyaadan u malaynaynin?
Waxaan rajeyneynaa in kordhintan ay si fiican kuugu adeegi doonto. Ma jirtaa fidinta Firefox kale oo la shaqeysa WordPress oo aad isticmaasho? Xor baad u tahay inaad la wadaagto faallooyinka hoose.
Sida Loo Isticmaalo Hashtags sanadka 2021: Hage Degdeg ah oo Fudud Shabakad Kasta
Sida Loo Muujiyo Boqolkiiba Battery Taleefanka Oppo